Indlela yokudibanisa i-bookcase kumhlobiso wegumbi lokuhlala | Bezzia
UToñy Torres | | Ukuhombisa amaqhinga
Ukudibanisa ivenkile yeencwadi kwigumbi lokuhlala lelinye lamaphupha okufunda abalandeli. Enye yezo nkohliso zidalwe ngenxa yokuba umntu ephupha ngendlu yakhe kwaye uyibona igcwele iincwadi ezifundwayo kwaye zifundwe. Noko ke, inyaniso kukuba akukho lula ukufaka ikhabhathi yeencwadi okanye ithala leencwadi elincinane ekhaya. Ngenxa yokuba indawo iqhelekile, xa sithetha ngokubanzi, incinci kakhulu kunokuba singathanda.
Nokuba i-bookcase inokungqubana ngokupheleleyo nalo lonke uhlobiso. Yintoni enokuguqula loo ndawo ifunwa kakhulu ibe ngumqobo kuyo yonwabela ubumnandi bendlu ehonjiswe ukungcamla. Iindaba ezilungileyo kukuba kukho amaqhinga asetyenziswa ziingcali ukudibanisa i-bookcase kumhombiso wegumbi lokuhlala. Ke ungonwabela ukuthanda kwakho ngaphandle kokuyeka isitayile ekhaya.
1 Amaqhinga okudibanisa i-bookcase kwigumbi lokuhlala
1.1 Fumana ikhabhathi yeencwadi ehambelana nezinye izinto zokuhombisa
1.2 Sebenzisa zonke izithuba
1.3 Yongeza izinto zokuhombisa
1.4 Odola kwivenkile yeencwadi
Amaqhinga okudibanisa i-bookcase kwigumbi lokuhlala
Ukuba unendawo enkulu, ungomnye wabanethamsanqa lokuba nevenkile enkulu yeencwadi kunye nengqokelela entle yeencwadi eziboniswayo. Kodwa ukuba oku akunjalo, okwenzekayo kuninzi lwethu, kuya kufuneka wenze ukhetho lweencwadi ezibonakalayo kunye nezo zinokugcinwa. Kuba akunakwenzeka ukuba nayo yonke into kobu bomi. Kwakhona kuya kufuneka sebenzisa amanye amaqhinga ukudibanisa ilayibrari yakho kwigumbi lokuhlala, njengokulandelayo.
Fumana ikhabhathi yeencwadi ehambelana nezinye izinto zokuhombisa
Unokwakha i-bookcase yomsebenzi ukuze ulungelelanise kuyo nayiphi na ikona yegumbi lokuhlala, ngaloo ndlela wenze ubuninzi bendawo. Unokukhetha kwakhona amashalofu kunye nefenitshala enemilinganiselo ethile, ukhetho alupheli. Yintoni ebalulekileyo kukuba i-bookcase ihambelana nayo yonke into yokuhlobisa. Kule nto, kungcono khangela izinto ezivumela ukuba ungeze ipeyinti okanye izinto zokuhlobisa.
Ngale ndlela, unokuziqhelanisa nefenitshala yeencwadi ngokuhambelana nazo zonke ezinye umhombiso. Ishelufu eluhlaza kunye neekhabhathi zeencwadi lukhetho olukhulu. Ngenxa yokuba unokupeyinta okanye uvanishe ngokwakho ukuze udibanise nabo bonke ukuhlobisa kwakho. Okufanayo kuya ifenitshala ye-masonry, nokuba i-plasterboard okanye iplanga. Zilula ukudibanisa kwaye unokuzidibanisa ngokulula kuyo nayiphi na ikona.
Sebenzisa zonke izithuba
Xa sicinga ngevenkile yeencwadi siyenza ngokuthe ngqo eludongeni, kodwa akukuphela kwendawo esinokubeka kuyo iincwadi. Kukho ezinye iinketho ezinokuthi zibe zezokuqala kwaye zivumelekile, ukuba nje iimeko zakho zikuvumela oko. Ukuba awunaso isilwanyana sasekhaya, unokwenza ikhabhinethi ephantsi ejikeleze udonga, kumgangatho ophantsi. Unokwenza kwakhona i-bookcase enomda wesakhelo socango, ngoko ke usebenzisa indawo ephezulu.
Yongeza izinto zokuhombisa
Ukuze i-bookcase ihlanganiswe kuyo yonke into yokuhlobisa igumbi, kufuneka ungeze ezinye izinto zokuhlobisa. Beka iintyatyambo ezomisiweyo kwiivazi kufuphi neencwadi, isityalo, imihlobiso ye-ceramic, ifoto okanye nayiphi na inkumbulo yezo, xa zijongile, zithutha kwixesha elimnandi. Kuba indawo ethengisa iincwadi ifanele izise uxolo, ubuchule bokuyila, ihlombe yaye ngaphezu kwako konke, umnqweno wokunandipha uncwadi oluthile.
Odola kwivenkile yeencwadi
Ukuze iincwadi zibonwe ngaphandle kokungqubana, kuyimfuneko ukuba ngamaxesha onke ziodolwe kakuhle, ngokweodolo yomntu ngamnye. Oko kukuthi, zininzi iindlela zokubeka iincwadi kwaye zonke zisebenza ngokulinganayo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba zisoloko zicwangciswe kakuhle. Musa ukubavumela ukuba babe nothuli kuphephe ukushiya izinto eshelufini ukuba akusiyo indawo yakho kwaye ukhusele imisebenzi yakho yobugcisa njengokungathi ubucwebe.
Iincwadi ezigcinwe ekhaya zithetha okuninzi ngomntu, indlela ayiyo nezinto azithandayo. Yonwabela indawo yokufunda ekhaya, kuba ukubukela iincwadi kwisofa kukwayindlela yokonwabela impilo entle yekhaya. Hlanganisa ilayibrari yakho kwigumbi lokuhlala kwaye uya kuhlala ufuna ukonwabela ixesha lokufunda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhombisa amaqhinga » Indlela yokudibanisa i-bookcase kumhlobiso wegumbi lokuhlala
Iingcebiso kunye namaqhinga okuvelisa ngakumbi ngokubanzi